भोलि यस्ता सवारीसाधन काठमाण्डौमा चलाउन नपाउने, ट्राफिकले दियो यस्तो सूचना !
कानुन पोष्ट संवाददाता Monday, December 9, 2019
दक्षिण यशियाली खेलकुदलाई मध्यनजर राखेर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौंमा सवारी आवागमनका लागि कडा नियम लागू गरेको छ । काठमाडौं भित्रका मुख्य सडकमा जोर विजोर नम्बर प्रणाली लागू गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरीले भोलि अर्थात् मंसिर २४ गते काठमाडौं उपत्यका भित्र जोर नम्बरका मात्र सवारी साधन चलाउन अनुरोध गरेको छ ।
ट्राफिक चापका कारण खेलकुदमा आएका पाहुनालाई समस्या पर्ने भएकाले यस्तो नियम लागू गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरूस्त, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन जोर नम्बरका मात्र गाडी चलाउन उपत्यकावासीहरूलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको विशेष अनुरोध गरेको हो।
जस अनुसार पुराना सवारी साधन चलाउन र हर्न बजाउन पनि निषेध गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई यस्तो आग्रह गरेको छ । प्रहरीले जारी गरेको सूचना यस्तो छ ।
PREVIOUS POST Previous post: सिड्नीमा नेपालीको गाँजा धन्दा !
NEXT POST Next post: अस्ट्रेलियाका जेलमा दुई दर्जन नेपाली !